बजेट, विवेचना र विरोधका स्वर : RajdhaniDaily.com
शरद अधिकारी - February 9, 2021 0
शरद अधिकारी - February 8, 2021 0
शरद अधिकारी - January 28, 2021 0
शरद अधिकारी - January 26, 2021 0
शरद अधिकारी - June 18, 2021 0
Home बिचार बजेट, विवेचना र विरोधका स्वर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याएको बजेट सदाझै घाटाको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि धेरै कार्यक्रम जनप्रिय रहेका छन् । कतिपयले बजेटलाई महत्वाकांक्षी भनेका छन् । कतिपयले बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि जटिल भनेका छन् । कतिपयले नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण बोकाएको भनेका छन् । कतिपयले यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैनथ्यो भनेका छन् । कतिपयले निर्वाचनको कुरा गरे पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेको भनिरहेका छन् । बजेटमा स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै धेरै बजेट राखिएको छ । सदाझैं शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट उल्लेख्य रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता जस्तो रहेको छ । नेपालमा शिक्षाको अवस्थालाई शतप्रतिशतमा पु-याउन सरकारले बजेट सोहीअनुरूप प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा रोखेको छ । समग्रमा बजेटले सबैलाई छोएको छ । खेतमा काम गर्ने किसानदेखि कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीसम्मका लागि बजेटले समेटेको छ । यस्तै, सानो पसल गर्ने व्यवसायीदेखि लिएर अर्बाैंको कारोबार गर्नेहरूलाई समेटेको छ । यस्तै, घरमा बस्ने सामान्य उपभोक्तादेखि लिएर धेरै महँगा उपभोक्तालाई पनि यसले समेटेको छ । यो बजेटमा खोट लगाउने ठाउँ नपाएपछि कतिपयले हाँसो लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले कृत्रिम हिसाबमा बजेटको आकार बढाएर चुनावमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । उनले धेरैपटक बजेट भाषण गर्नेमध्येको अर्थमन्त्री हुन् । तर, उनले संवैधानिक विधि पद्धति तथा मूल्य र मान्यताविपरीत बजेट आएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले अनावश्यक रूपमा सामाजिक सुक्षा भत्ता र तलब वृद्धि गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । कर्मचारीको तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कानुन मिचिएको उनको भनाइ छ । यस्तै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५आंै योजनाको लक्ष्यलाई धक्का पुग्ने गरी प्रस्तुत गरिएको बताए । सरकारले चालूतर्फ जाने खर्च लुकाउन बजेटको अनूसची १ नै परिवर्तन गरेको आरोप उनको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्द पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राम्रा–नराम्रा पक्ष रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले ३ घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको ५ सय बुँदाको बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका लागि राम्रै कार्यक्रम ल्याइएको बताए पनि बजेटले सबै विषय छुनै नै बजेटको कमजोरी पक्ष भएको औंल्याए ।
विरोधका लागि विरोधभन्दा रचनात्मक सुझाव दिनेहरूबाटै समृद्धिको ढोका खुल्छ
अर्का पूर्वउपाध्यक्ष: डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले बजेटको खर्च र आम्दानीको हिसाब तथा अर्थ मन्त्रालयको फम्र्याटअनुसार हेर्दा बजेटमा खोट लगाउन ठाउँ नभएको बताएका छन् । तर, उनले खर्चका स्रोतको व्यवस्थापन, खर्चको क्षमता, संस्थागत क्षमतालाई हेर्ने हो पहुँचवाला कार्यकर्तामा मात्रै बजेट पुग्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा प्रस्तुत बजेट फितलो भएको पोखरेलको भनाइ छ । अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बजेट ठूलो आकारमा प्रस्तुत भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बजेट पूर्ण आकारमा आउनु तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयको विषयमा प्रश्न गर्ने सकिने पौडेलको तर्क छ । यो बजेटले पनि विगतमा बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान नदिएको उनले बताए । ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर वितरणमुखी तथा लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको टिप्पणी पौडेलले गरे । पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुद्रास्फीति सरकारले लिएको सीमाभित्र राख्न कठिन भएको बताउनुहुुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत राखेको २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने भएकाले मुद्रास्फीति बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा बजेट भाषण गर्न थालेको लामो समय भएको छैन । केही वर्षअघिसम्म पनि बजेट खर्बमा हुँदैनथ्यो । अब बजेट खर्बमा अघि बढेको छ । अबको केही वर्षमा यो दायरा अझै फराकिलो हुँदै जाँदा १ सय खर्ब बजेट भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढिरहेको कुरालाई बजेटले प्रस्तुत गरिरहेको छ । हामीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष खर्ब बढीको निर्यात गरेका छौं । नेपालको इतिहासमा यति धेरै निर्यात भएको थिएन । नेपालले केही सीमित वस्तुलाई मात्रै विदेशमा पठाउने गरेकोमा विस्तारै त्यो दायरा बढेर गएको छ । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुको संख्या र परिमाण बढ्दै गएको छ । यो सबैभन्दा खुसीको कुरा हो । हामीकहाँ विभिन्न वस्तुको उत्पादन बढ्दै गएको छ । नेपालभन्दा साना देशले संसारको व्यापारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । ठूलो लगानीले मात्रै होइन ठूलो सोचले व्यापार गर्न सकिन्छ । हामीले सुन्दै आएका छौं कि अमेरिकामा प्रयोग हुने देशको झन्डा ९० प्रतिशत चीनमा तयार हुन्छ । अब भन्नुस् चीनले आफ्नो व्यापारको दायरालाई कहाँसम्म पु¥याएको रहेछ । अहिले पनि विश्वका विकशित देशहरू कुनै न कुनै ब्रान्डलाई आफ्नो बनाएर बसेका छन् । कोही प्लेन बनाउँछन् । कोही हेलिकोप्टर बनाउँछन् । कोही गाडी बनाउँछन् । कोही मोबाइल बनाउँछन् । कोही अन्य खालका साधन तयार गर्छन् । कोही अन्न उत्पादन गर्छन् । नेपालमा अझ भन्ने हो भने दाङ जिल्लामा हामीले खाइरहेको तोरीको तेलका लागि तेल क्यानडाबाट आइरहेको छ । कहाँको क्यानडा, कहाँको नेपाल । सात समुद्रपारबाट यहाँ आएको तोरीलाई हामीले आफ्नो उपभोगको विषय बनाएका छौं । यस हिसाबले हामीले तोरी उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हो भने मात्रै पनि अर्बाैं रकम नेपालमा बस्न सक्छ ।
बजेट कार्यान्वनमा सरकारी निकायको भूमिकाका साथसाथै आमनागरिकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ
नेपालमा बजेट भाषण गर्नेहरूले आफूले बजेट भाषण गर्दा उत्कृष्ट बजेट आएको दाबी गर्दछन् तर त्योभन्दा फरक खालको भूमिकामा रहेको समयमा विरोध गर्छन् । यो पुरानो चलन भएको छ । यस वर्ष आएको आगामी वर्षको बजेटमा पनि यस्तै देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरे । नेपाली जनताले बडो गजबसँग बुझे तर अर्थशास्त्रीहरूले बुझेनन् । जनताले के कुरामा राहत पाइने भयो ? के कुरामा सुविधा पाइने भयो ? के कुरामा सजिलो हुने भयो भन्ने कुरा निकै राम्रोसँग बुझे । तर, अर्थशास्त्रीहरूले बजेट महŒवाकांक्षी भयो । बजेट पपुलिष्ट भयो । बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता छ । बजेटले सबैलाई समेट्यो यो नै नराम्रो भयो भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सक्ने भए यिनीहरूले रौलाई पनि चिरा पार्ने थिए । सक्ने भए तोरीको गेडामा पनि प्वाल पार्ने थिए । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि समाजवादी खालको बजेट आएको छ । सबैले बुझ्ने भाषामा बजेट आएको छ । आलोचना गर्नेहरूले नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थपियो । सरकारले ऋण भार थप्यो भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले के देखाउँछन् भने चीनले पनि अमेरिकालाई ऋण दिने गरेको छ । विश्व यसैगरी चल्छ । यो कुरा अन्यथा होइन । आएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सडकहरू बन्नु, जलविद्युत्का आयोजना बन्नु, पुल बन्नु, उद्योग सञ्चालनमा आउनु, कृषि कर्म गर्नेहरूको संख्या बढ्नु र उत्पादन बढ्नु । विकासका सूचक यिनै त होलान् । बजेटले सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकलाई समेत सम्बोधन गरेको यस वर्षको बजेटबारे विरोधका स्वरहरू विरोधका लागि विरोधमा आएका छन् । विपक्षीमा भएपछि विरोध त गर्नु परिहाल्यो । केही शब्द भन्नु परिहाल्यो भनेर भनिएका जस्ता छन् ।
बजेटले निर्वाचन लक्षित मात्रै रहेको छैन । बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकार र पालिकाहरूमा पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा तीन तहमा रहेका सरकारमध्ये केही ठूला आयोजनाको कुरा संघीय सरकारले गर्छ । संघीय सरकारले केही नीतिगत कुरा गर्छ । यतिबेला संघीय सरकारले बजेटमा जेजस्ता विषय समेटेको छ ती विषयहरू दीर्घकालीन महŒवका विषय रहेका छन् । चाहे त्यो स्वास्थ्यको कुरा होस् चाहे त्यो शिक्षाको कुरा होस् । यस्तै पर्यटनको विषयमा पनि बोलेको छ । कर्मचारीको कुरा पनि गरेको छ । विद्यार्थीका लागि कुरा गरेको छ । वृद्धवृद्धाको कुरा गरेको छ । दलितको कुरा गरेको छ । मुक्त कम्लहरीको कुरा गरेको छ । सञ्चारको कुरा गरेको छ । नेपालमा सञ्चारको विकासका लागि यसपटक केही उदाहरणीय कार्यक्रम ल्याइएको छ । अर्थात् सबैको कुरा गरेको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि बजेटको चुनौती भनेको नै कार्यान्वयनको हो । बजेट आउनु ठूलो कुरा होइन बजेट कार्यान्वयन नै ठूलो कुरा हो भन्ने थाहा पाएकाले विगतमा कति कार्यान्वयन गरे त्यो पनि समीक्षाको विषय हुने कि नहुने । अर्को कुरा बजेट कार्यान्वनमा आमनागरिकको पनि भूमिका हुन्छ । सरकारी निकायको भूमिका त अवश्यै बढी हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्ने कुरामा पनि नागरिकको भूमिका हुन्छ । विरोधका लागि विरोधभन्दा रचनात्मक सुझाव दिनेहरूबाटै समृद्धिको ढोका खुल्न सक्छ ।
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का नेता झलनाथ खनाल थापाथलिस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल भर्ना भएका छन् । नियमित उपचारका क्रममा अस्पताल आउनुभएका नेता खनाललाई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै...
काठमाडौं । अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित...
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । केही दिन सुस्ताएको नेप्सको वृद्धिमा बुधबार भने झण्डै...
प्रदेश शरद अधिकारी - October 18, 2020 0
बिचार शरद अधिकारी - April 11, 2020 0
प्रदेश २ शरद अधिकारी - September 21, 2020 0
प्रमुख शरद अधिकारी - August 21, 2020 0
Not-to-be-missed शरद अधिकारी - September 21, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - May 22, 2021 0
काठमाडाैं । कांग्रेस नेता गगन थापाले सन्की प्रधानमन्त्री र मतियार राष्ट्रपतिले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा हालेको बताएका छन्। आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘खड्ग ओली र...
प्रदेश ४ शरद अधिकारी - February 23, 2021 0
प्रदेश ३ शरद अधिकारी - October 8, 2020 0
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ८ पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्...
Exclusive शरद अधिकारी - July 6, 2020 0
जनवादी गायिकाले गाइन् प्रेमका गीत
Not-to-be-missed शरद अधिकारी - November 5, 2020 0
‘देखें माया थुक निल्छु घुटघुटी, त्यही मायाले बनाउँदा हुटहुटी हो, चोली ढाकाले...’ चार दिनअघि सार्वजनिक भएको यो गीत अहिले दर्शकले रुचाएका छन् । यो गीतलाई...
शरद अधिकारी - March 5, 2020